सिंगो उपत्यकामा माहोल ल्याउने क्षमता छ :: केशव स्थापित, नेकपा (एमाले) – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
११ कार्तिक २०७७, मंगलवार १०:१८ English
सिंगो उपत्यकामा माहोल ल्याउने क्षमता छ :: केशव स्थापित, नेकपा (एमाले)
० हिजोआज के गर्दै हुनुहुन्छ?
– म नेकपा (एमाले)को एक कार्यकर्ताका नाताले आगामी मंसिर ४ को निर्वाचनमा एमालेको पुरानो शाख देशव्यापी रूपमा पुनःस्थापना गर्ने र उपत्यकामा पहिलेकै विजय स्थितिमा पुर्‍याउने अभियानमा लागेको छु।
० हिजो शून्य सिटमा पुगेको उपत्यकामा उपस्थिति सुधिरयो त?
– त्यसबेला हामीले त्यस्तो माहोल खडा नै गर्न सकेका थिएनौं। हामीमा अलिअलि दम्भ पनि थियो, अलि बढी विश्वास पनि थियो। तर, धरातलीय यथार्थ त्यस्तो थिएन। धेरै मान्छे त्यसबेला माओवादीमा गएका थिए, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीमा गएका थिए। हामीले त्यसलाई आकलन गर्न सकेनौं।
० यही नै कारण हो पराजयको?
– त्यतिमात्र होइन, उम्मेदवारी चयनमा पनि ठीक सोच राख्न सकेनौं। तर, केही कुरा मिल्यो भने हिजोको परिणाम उल्ट्याउन सकिन्छ। मैले त्यही ढंगले काम गरिरहेको छु।
० त्यो गर्न सक्दा त चमत्कारै हुन्छ नि!
– हुन्छ। केशव स्थापित त चमत्कार नै गर्ने मान्छे हो। उपत्यकामा उम्मेदवारी चयनमा विवेकपूर्ण निर्णय हुँदा त्यो परिणाम नउल्टिने कुरै छैन। त्यसैका लागि म बिहानदेखि बेलुकासम्म नेताहरूकहाँ नै धाइरहेको छु।
० नेताहरूलाई के भन्नुभएको छ?
– उम्मेदवारी चयनमा विवेकपूर्ण निर्णय हुनुपर्‍यो। केही ठोस निर्णय पनि हुनुपर्‍यो। गुटभन्दा माथि उठेर काम गर्न सकियो भने उपत्यकामा हामी लहर ल्याउन सक्छौं। उपत्यकाको प्रभाव भनेको मेचीदेखि महाकालीसम्म पर्छ भनिरहेको छु।
० तपाईंको भनाइमा पत्याउने आधार देखेका छन् त नेताहरूले?
– देख्नुपर्छ। ०५१ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले हामी २८ देखि ३२ सिट जित्छौं भन्नुभा’थ्यो। त्यसबेला म युवा संघमा भएको बेला मैले पिक्चराइज गरेको थिएँ कि हामी बहुमत सिट ल्याउन सक्छौं। परिणामतः त्यसबेला ६९ सिट आयो। ३० वटा जतिमा चाहिँ हामी २–३ सय, ४ सय र ५ सयमा हार्‍यौं। हाम्रो सक्रियताले एउटा माहोल खडा गर्न सकियो नि! त्यसको मूल केन्द्र भनेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग मदन भण्डारीलाई लडायौं। त्यसकै कारण आमरूपमा एउटा के सन्देश गयो भने नेपाली कांगेरसभन्दा एमाले एक रत्ति पनि कम छैन। बराबरी र अझ उछिन्ने छ भन्ने सन्देश गएपछि त्यसले कार्यकर्तालाई पनि उत्साहित गर्‍यो र आम मतदातालाई पनि ‘यिनीहरूले पनि सरकार बनाउन सक्छन्’ भन्ने बनायो। मतदाताले पनि नयाँ शक्तिलाई दिनुपर्छ, सरकार बनाउनेलाई भोट हाल्ने भन्ने मनस्थिति बनाए। जुन कुरा अघिल्लो निर्वाचनमा हामीले उपत्यकामा गर्न सकेनौं।
० पार्टीको ठोस जिम्मेवारी पनि छ कि?
– छैन, संगठित सदस्य हुँ। त्यसबाहेक कुनै एकाइमा छैन। तर, मेरो त कर्तव्य नै हो नि! हिजो एमालेमा सदस्यता लिएदेखि नै पार्टीले अनवरत मलाई दिएकै छ। मलाई पार्टीले नै युवा संघमा महासचिव, अध्यक्षजस्तो गम्भीर जिम्मेवारी दियो, खेलकुद परिषद्मा सदस्य–सचिव बनायो, मेयरजस्तो प्रभावकारी पदमा उठाइदियो। मैले पनि केही गरेर देखाइदिएँ। पार्टीले जुन हदमा मलाई गुन लगाउने र उकास्ने काम गर्‍यो, पार्टी पनि त्यो हदमा उठेको छ नि! पार्टीको ममाथि जुन लगानी छ, त्यो लगानीको मैले तिरो तिर्ने बेला आएको छ।
० तपाईंले भनेजस्तो लहर उत्पन्न गर्न सकेमा एमाले कुनै हैसियतमा आउला देशभरिमा?
– मेरो लहर उपत्यका केन्द्रित छ। उपत्यकामा सबै क्षेत्रमा एमालेले उछिन्ने भयो भन्ने सन्देश गयो भने त्यसको प्रभाव मुलुकव्यापी पर्छ। यहाँ कमजोर भयो भने सबैतिर कमजोर हुन्छ।
० १० नम्बर क्षेत्रमा प्रचण्ड पनि हार्लान् त?
– १० नम्बरमा प्रचण्ड आउने हल्ला छ। तर, मेरो विचारमा उनी नआउन सक्छन्। किनभने, त्यहाँ एमालेले खास स्थानीय मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउने कुरा गरेको छ, त्यसले अहिले नै लहर आइसकेको छ। प्रचण्डले १० नम्बरमा जितेर के गरे र? त्यसैले उनलाई हराउनुपर्छ भन्ने विचार आइरहेको छ। त्यहाँका नेपाली कांगेरसलाई भेाट हालेका साथीहरू पनि पहिला एक पटक भनेर प्रचण्डलाई भोट हाल्यौं तर साह्रै ठूलो पश्चात्तापमा पर्‍यौं भन्दैछन्। त्यसैले प्रचण्डलाई हराउनुपर्छ भन्ने माहौल उठिरहेको छ।
० तपाईंको दाबी चाहिँ कति नम्बरमा हो?
– ६ नम्बर क्षेत्रमा मैले दाबी गरेको छु। मैले जित्ने ‘पिक्चर’ नै दिएको छु।
० कस्तो छ त्यो ‘पिक्चर’?
– गाउँतिरको ७ गाउँमा ५–७ सयदेखि हजार भोट हाम्रो बेसी छ। त्यसभन्दा अझै केही बढी ल्याउन सकिएला। तर, नगरमा प्रवेशपछि नगरमा एमालेको भोट भाँडिएको छ। त्यसमध्ये केही खुलेआम माओवादी भनेर लागे। केही संघीय समाजवादी र केही नेपाः राष्ट्रिय पार्टीमा गएका छन्। भित्री सहरमा एमाले भनेर भोट हाल्ने होइन। मेरो उपस्थितिको कुरालाई लिएर अरू पार्टी भन्ने सामान्य भोटरहरूलाई कुरा गरौं, उनीहरूले तपाईं आउनुभयो भने हाम्रो भित्री सहर इन्ट्याक्ट बस्छौं भनेका छन्। त्यसमाथि गाउँ क्षेत्रको प्रतिबद्ध हाम्रो भोट यसै छँदैछ। मेरो क्षेत्र यो हो भेनर छुट्टिनासाथ मेरो प्रयोजन त मैले अर्को क्षेत्रमा गएर सहयोग गर्ने स्थिति बन्छ नि!
० उपत्यकामा एमालेको स्थिति के हुन्छ त?
– १ नम्बरमा सही उम्मेदवार खोजी गर्दैछौं। त्यसबाहेक ५–७ क्षेत्रमा त हामी जित्छौं नै। २–३ क्षेत्रमा हामी प्रतिस्पर्धी बन्छौं। त्यसमा उपयुक्त अभियान गर्ने र उम्मेदवारीको कुरा उठाएको छु मैले।
० क्षेत्र नं. १ त कांगेरसको साह्रै गढ छ नि?
– गढ सढ केही होइन। उपयुक्त उम्मेदवार हुनुपर्छ। मदन भण्डारीजस्तो उठाएर कृष्णप्रसादलाई हराएको क्षेत्र त्यही हो।
० काठमाडौंको २ नम्बर चाहिँ एमालेका लागि कस्तो छ?
– मलाई सबैभन्दा पहिलो सम्पर्क दिने, यहाँसम्म ल्याउने नेता माधव नेपाल हो। उहाँलाई खतरापूर्ण स्थिति त मैले पार्न भएन। त्यसका लागि ३५ नम्बरकै युवाहरू परिचालन गर्नुपर्‍यो नि! उहाँका वरिपरि ३५ नम्बर वडामा धेरै मत छैन। मैले त्यो सबै मेरा केटाहरूलाई भन्दा उनीहरूले ‘दाइ नै लाग्नुभयो भने हामी खट्छौं’ भनेका छन्। माधव नेपालको उम्मेदवारी दर्ता गर्दा २ हजार जति मोटरसाइकल निकालौं भन्ने लाग्या छ। एकैदिनमा २ हजार मोटरसाइकलका बीचमा बसेर बाजागाजासहित मनोनयन गर्न जाँदा कसले जित्छ भन्दा माधव नेपालले जित्यो भन्ने ‘इम्पेरसन’ पर्दैन? प्रत्येक उम्मेदवारका लागि ढाँचा फरक–फरक हुन्छ। परिचालनमा राम्रो कौशल प्रदर्शन गरियो भने उपत्यकामा हिजो भएको निराशा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ।
० काठमाडौंमा त्यति जित्ने दाबीका आधारहरू के के हुन्?
– ६ नम्बर भनेको सहरभित्रको केन्द्र हो। बागबजार, असन, ठमेल, सामाखुसीजस्तो ठाउँमा एउटा सिट एमालेको भयो, केशव स्थापितसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसकिने भयो भनेर सन्देश जानु भनेको तत्काल प्रभाव ईश्वर पोखरेलको क्षेत्रमा पर्छ। सिमाना जोडिएको छ। त्यही कुरा हिसिलाजीको क्षेत्रमा पर्छ। यो ३ क्षेत्र प्रभावमा आउने, यता १० नम्बरमा उपयुक्त उम्मेदवारी चयन गरियो भने ३ नम्बरमा कहिले नसकेको उपलब्धि हात पर्न सक्छ। मैले गाउँ क्षेत्रतिर सबै फिलिङ गर्‍या छु। उहाँहरूले तपाईंजत्तिको मान्छे चाहिन्छ भन्नुहुन्छ। एउटै केशव स्थापितले २–३ ठाउँमा उठ्ने कुरा त भएन। भोलि यो सहर बनाउने, यहाँको विकासको प्रशस्त सम्भावनाको कुरा गर्ने हो भने मजस्तो मान्छे एक ठाउँमा हुनुपर्‍यो र मसँगै काम गर्ने स्पिरिट भएको मान्छे चाहिँ मलाई तपाईंहरूले जुटाउनुपर्छ भनेको छु। त्यहाँ म उभिएपछि नेपाली कांगेरसकै सामान्य मान्छेलाई पनि हो यसको भनाइमा सत्यता छ भन्ने तहसम्म ल्याउन सकिने, कार्यकर्ता उत्साहित हुने देखियो। ३ नम्बरमा मैले फिल्डिङ गर्ने हो भने हामी जित्न सक्छौं। ४ मा अलि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। १ मा उम्मेदवारको खोजी गर्नुपर्छ। ८ नम्बर क्षेत्रमा पनि उम्मेदवारीमा अलि ख्याल गर्नुपर्दछ।
० भनेपछि अन्य क्षेत्रमा पनि उम्मेदवार जानै परेन, तपाईंले आफैं गएर जित्ने ठेक्का लिनुहुने भयो?
– मैले ईश्वर पोखरेलजीलाई प्रस्टै भनेको छु– ‘महासचिवजस्तो मान्छे वार्ड, वार्डमा सानोसानो भेलामा गएर व्यक्तित्व पनि स्खलन हुन्छ। तपाईंले त मेची महाकाली गएर जनतालाई उत्साहित पार्नुपर्ने हुन्छ।’ यो गर्नका लागि आधार तयार पार्न बूढानीलकण्ठदेखि उहाँको सबै क्षेत्रमा ६ हजार भोटको पहिले अन्तर थियो। त्यो सबै भोट हाम्रो थपिन्छ। भोट त्यो बेला नेपाली कांगेरसतिर गएको थियो। हाम्रोमा भएको भोटभन्दा ६ हजार बढ्छ, अरू पक्षको ६ हजार भोट घट्छ। यसो हुँदा १०–१२ हजारको अन्तरले महासचिवले जित्छन्। तर, त्यसो गरिएन भने त्यो युवाहरूलाई कांगेरसका मान्छेलाई को भएर परिचालन गर्ने? त्यो त मसँग हिजो व्यावसायिक सम्बन्ध, अरू सम्बन्ध हिजो भनेपछि तिर्दोरहेछ के! मान्छे त मान्छे नै हुँदोरहेछ।
० आठ नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ?
– अहिले जानेर वा नजानेरै भए पनि जातीय कुरा त उठेको छ। नेवारलाई उठाउने भनेर मात्रै हुँदैन। नेवारभित्र पनि वर्गीकरण हुन्छ। आठ नम्बर भनेको डंगोल, महर्जनको यति ठूलो संख्या छ कि त्यहाँ उहाँहरूले विश्वास गर्ने मान्छे उठायो भने मात्र जित्छ। १२–१५ हजार त उहाँहरूकै भोट पुग्ने किसिमले आउँछ। तर, त्यहीँभित्र पनि एउटा नेवार भनेर बेठीक खालको उम्मेदवार दियो भने त्यो लहर आउँदैन। अनुरोध र आग्रहले मात्र भोट आउने होइन।
० त्यस्तो मान्छे बाहिरी क्षेत्रमा छ कि त्यहीँ छ?
– त्यहीँ छ। मैले धेरै पल्ट भनेको छु। यो सार्वजनिक रूपमा मैले भन्ने कुरा भएन। मैले क्याम्पियन चल्नासाथ यही व्यक्ति हो भनिसकेको छु। निश्चित समुदायका मान्छे जो १८–२० हजार त्यहाँ बस्छन्, यसमध्ये १२–१५ हजार भोट ठ्याक्कै आएपछि हाम्रो पार्टीको भोट अलिकति थप्नासाथ जित्यो। त्यसैले मैले भनेका गोल गर्ने मान्छेलाई दिनुपर्‍यो। फलानो केन्द्रीय कमिटीमा छ वा पोलिटब्युरोमा छ, दिएन भनेर रिसाउँछ कि वा महाधिवेशनमा प्रभाव पर्छ कि भनेर गुट आग्रह देखियो। नभए मैले प्रस्तुत गरेका केही मान्छे अगाडि सार्ने हो भने उम्मेदवारी दिनासाथ जित्छ।
० तपाईंले दाबी गरेको क्षेत्रबारे नेताहरूले के भने त?
– मैले सबै शीर्ष नेताहरूसँग कुरा गरें। सबैको भनाइ ‘योगेशजीले चित्त दुखाउँछ कि?’ भन्ने छ। तर, जित्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। बरु कुन क्षेत्रमा ‘एडजस्ट’ गर्ने हो त्यो पार्टी नेतृत्वले सोचोस्। योगेशजीलाई नै सुधार त भएको छ, तर जितिन्छ नै भन्ने चाहिँ लाग्या छैन। फेरि त्यो ठाउँ त जसरी पनि छोड्नुहुँदैन। त्यो यस्तो ठाउँ हो, जहाँ उम्मेदवारी दिनासाथ जित्यो भन्ने मान्छे न लानुपर्‍यो। त्यसैले मैले झलनाथ खनाललाई पनि भनेको छु।
० उहाँले के भन्नुभयो?
– कमरेड झलनाथले ‘योगेश पनि लाग्या छ, योगदान छ, चित्त दुखाउँछ कि, अन्त एडजस्ट कहाँ
गर्ने?’ भन्ने गुनासो गर्नुभयो। वामदेवलाई पनि भनेको छु। उहाँले ‘योगेशसँग म भिडेर लाग्दिनँ। हुँदैन भनेर त म भन्दिनँ। तर जित्ने चाहिँ केशव स्थापित हो भनेर सत्य कुरा बोल्न चाहिँ सक्छु’ भन्नुभयो। युवराज ज्ञवालीले पनि योगेशलाई अर्को क्षेत्रमा लानुपर्ला भन्नुभा’छ।
० हिसिलाले तपाईंलाई उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट जबर्जस्ती हटाइदिनुभयो, अहिले उहाँसँगै लडेर हिसाब–किताब चुक्ता गरिदिउँ जस्तो लाग्या छैन त?
– केही मान्छेहरूले त्यसो पनि भनिरहेका छन्। तर, अहिले हिसिला यति अलोकप्रिय भएकी छन् कि उनलाई हराउन म नै जानुपर्छ जस्तो लाग्दैन। कुनै मभन्दा जुनियर साथीलाई नै पठाइदिए पनि पुग्छ। फेरि त्यो ठाउँमा जसले अनवरत रूपमा योगदान गर्‍या छ, उसलाई विस्थापित गर्न म छिद्र खोजेर जान हुँदैन भन्छु। त्यो क्षेत्रबाट पनि मलाई त आग्रह छ। आज (सोमबार) पनि क्षेत्रपाटी क्लबले एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्ने भनेर ‘तपाईं भोलिको यहाँको उम्मेदवार बन्न सक्ने मान्छे भएकाले आउनु’ भन्थे। मलाई चाहिँ सबै ठाउँमा खोज्छन्। अस्ति ललितपुर–३ नम्बरबाट एउटा डेलिगेसन जस्तो माओवादीमा आबद्ध थुपैर साथीहरू, वडा अध्यक्षहरू आएर ‘तपाईं जत्तिको मान्छे भए हामी बोक्न सक्छौं, जित्छ’ भने।
० ललितपुर, भक्तपुरमा के होला?
– एउटा सिट चाहिँ अहिले पनि रोहितजीलाई छोडिदिउँ। भक्तपुरमा अर्को जित्छौं। ललितपुरमा कृष्णलालजीको २ नम्बरमा ठूलो लहर देखियो। त्यसले अरूलाई कति प्रभावित गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। ललितपुरमा प्रभाव पर्न पनि काठमाडौंमा वेभ के उठ्यो भन्ने कुराले निर्भर हुन्छ। काठमाडौंको पनि असन वरिपरि देखिका मूलक्षेत्रमा तामझाम भएपछि त्यसको असर दायाँबायाँ जाने रहेछ। फेरि मैले अहिले के जिम्मेवारी लिएको भने मेरो उम्मेदवारी ६ नम्बरमा भयो भने म केही दिन गाउँमा जाने हो। नगरमा सबै प्रचार समितिले काम गर्लान्। एकसरो भोट माग्न जाने हो। अरू सबै भनेको यो काँठे क्षेत्रमा सबै ठाउँमा डुल्ने हो। र, प्रश्न गर्ने– संविधानमात्र होइन, तपाईंहरूको जीवनको रूपान्तरणको कथा हाल्ने मान्छे, मलाई सहयोगी अरू सांसद पनि चाहियो, त्यसकारण एमालेलाई जिताउन तपाईंहरू तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? भन्दा सबैले हात उठाउँछन्। अहिले आम नागरिकमा कस्तो चेतना देखियो भने विकास निर्माणका कुराहरू हुने, आफूमा जीवनमा केही रूपान्तरण आउने भएपछि ‘म कांगेरस, एमाले, माओवादी’ नभन्ने छ।
० दुवै माओवादी तालमेल गरेर उपत्यकामा प्रस्तुत भए भने एमालेलाई फेरि गाह्रो पर्ला नि?
– त्यस्तो सम्भावना म देख्दिनँ। किनभने मैले वैद्यजीकै नजिकका नेताहरूसँग सम्पर्क गर्दा ‘मिल्ने भन्ने त सम्भावना नै छैन’ भन्नुहुन्छ। ‘तालमेल एमाओवादीसँग गरेपछि त विभाजनको औचित्य नै खत्तम हुन्छ’ भन्नुहुन्छ।
० मंसिरको चुनाव चैतमा सार्ने भन्दैछन् नि?
– चैततिर चुनाव लैजान हुँदैन। त्यो बेलासम्म फेरि १० वटा कुरा उठिसकेको हुन्छ। चैत भनेपछि कुन सालको चैत भन्ने कुरा आउँछ।
० चुनावी रणनीति पनि फेर्नुपर्छ कि एमालेले चुनाव जित्न?
– अवश्य। मैले काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर १ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग मदन भण्डारीलाई लानुपर्छ भन्दा मेरो २ नम्बरको घोषित सिट खोसियो। त्यो ठाउँमा मदन भण्डारी उभिएपछि सबै ठाउँमा बराबरी भयो नि! अझ मैले त त्यो बेला अरूले हेलिकोप्टर प्रयोग गर्छ भने हामी पनि गरौं भनेको थिएँ। हाम्रा नेता ‘खुइय’ गरेर डाँडामा उक्लने अनि सरकारी पक्षले हेलिकोप्टरमा गएर भाषण गरेपछि हामी पछाडि पर्दैनौं? बराबरमै जित्न सक्छ भन्ने भान पार्‍यो भने सहयोग गर्नेले पनि गर्न सक्दो रहेछ नि! जित्ने मान्छेलाई सहयोग गर्ने भन्ने ‘टेरन्ड’ छ क्या! हामी पनि हेलिकोप्टरमा गएर १०–२० ठाउँमा घुमिदिएको भए त्यो बेला १०–२० सिट बेसी ल्याउन सकिन्थ्यो। ६९ मा २०–२५ सिट जोडिएको भए त हाम्र्रो त्यही बेला बहुमतको सरकार बन्थ्यो। त्यो उचाइबाट चिन्तन गरिएन। एक ठाउँमा फोड्नुपर्छ। एक ठाउँमा चिरा परेपछि सजिलो हुन्छ। अहिले चाहिँ चिरा पर्‍या छैन। एमालेकै साथीहरूले ‘कुन क्षेत्र जित्छ’ भन्दा ‘यही क्षेत्र जित्छ’ भन्ने स्थिति देखापरेको छैन। तर, मेरो उम्मेदवारी भयो भने ६ नम्बर हाम्रो भैसक्यो, कसैले केही चिन्ता लिन पर्दैन।
७ आश्विन २०७०, सोमबार ०४:२० मा प्रकाशित